Fango 25 ankehitriny voafantina hanome aingam-panahy anao | Famoronana an-tserasera
El Logo Io no singa sary fantatry ny mpanjifa indrindra. Rehefa tery ny teti-bola ary kely ny mpanjifa dia mahazatra antsika ny angatahina hanao sary famantarana: indrindra raha momba ny orinasa na tetikasa efa ho teraka izy io, ary tsy manana na inona na inona mihitsy.
Izany hoe mbola tsy manana ny maha izy azy orinasa. Sarin'ny marika tsy ampy. "Tsia, fa raha manao logo fotsiny ...". Mety efa nandre azy mihoatra ny indray mandeha ianao. Fantaro izany, sy ny filàna mahazo aingam-panahy Raha ny resaka raharaham-barotra miaraka amin'ity karazana fanendrena ity dia eto ambany no nifidiananay logo miisa 25 noforonina tamin'ny taona lasa ho hitanao, hianarana, hamakafaka ary hitsikera.
Samy hafa be ireo logo ankehitriny
Etsy ambany no hahitanao ny zavatra rehetra, saingy tsy azo ihodivirana ny fanamarinana ny maha-zava-dehibe ny typography amin'ireo asa ireo. Tsy fantatro ny antony, fa tena manintona ny asan'i Brandon Nickerson aho. Miaraka amin'ny fikitika mahazatra kokoa ananantsika ny famoronana Zuzanna Rogatty. Izahay koa mampiseho logo izay, tsy isalasalana, mahery kokoa ilay marika. Toy ny nitranga tamin'i Jared Granger. Indraindray ny endritsoratra dia mametraka ilay marika, toa an'i Cris Lambo. Ary hanidy ny lahatsoratra rehefa manokatra azy izahay, safidy iray hafa nataon'i Brandon Nickerson.
Brandon Brandon Nickerson sy Luis Samaniego:
Zuzanna Rogatty famantarana ny marika fitafiany:
Jared Granger logo. Tiako ny fanazavana.
Ny sary famantarana an'i Cris Labno, izay milalao amin'ny toerana ratsy. Loharanom-baovao tena mahazatra rehefa manao logo.
Brandon Nickon logo indray:
Inona izany ho anao ny mafy indrindra amin'ny fotoana fananganana sary famantarana? Manao ahoana ny fizotry ny famoronana? Ny zavatra mahazatra dia ny misaina hevitra, ny hevitra maneho ny marika aseho amin'ny sary masina (na hita taratra amin'ny fananganana endrika tsy manam-paharoa) ary avy eo fanarenana sy famolavolana izany rehetra izany. Inona no ataonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Logo 25 ankehitriny hanome aingam-panahy anao